Football Khabar » ‘सर्वाधिक मूल्यवान्’ क्लबको सूची सार्वजनिक : कसको स्थान कहाँ ?
‘सर्वाधिक मूल्यवान्’ क्लबको सूची सार्वजनिक : कसको स्थान कहाँ ?
चर्चित पत्रिका ‘फर्ब्र्स’ले विश्वका सर्वाधिक मूल्यवान् क्लबहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड सूचीको सबैभन्दा सिरानमा छ । रियल २ वर्षपछि मूल्यवान् क्लबको शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो ।
सूचीअनुसार रियलको हालको अवस्थामा कूल मार्केट भ्यालु अमेरिकन डलर ४.२४ बिलियन छ । त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा स्पेनकै क्लब बार्सिलोना रहेको छ । बार्सिलोनाको भ्यालु पनि रियलको भन्दा केही कम तर ४ बिलियनभन्दा बढी नै छ ।
सूचीको तेस्रो नम्बरमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र चौथो नम्बरमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख रहेका छन् ।
यस्तो छ टप–१० को सूची :
प्रकाशित मिति ७ श्रावण २०७६, मंगलवार ०७:५७